Ijaji Igama Imibono Ngokombono Wezithameli | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 11, 2009 ISonto, Ephreli 24, 2016 U-Adam Encane
Lapho wahlulela imibono yokuqamba amagama, gcina ulwazi lomhlaba wangempela, hhayi ulwazi lwamanga lwezethulo zokudala. Nansi into, uma usho noma ukhombisa umqondo wegama kothile ngenhloso yokumenza athenge noma anikeze impendulo, akanalo ulwazi olufanayo nomthengi osemkhakheni azoba nalo.
Uma wethula imibono yamagama, iklayenti lakho noma osebenza naye uzokwenza ubuchopho bakhe obunolwazi, obunengqondo busebenze. Uzobe ecabanga, "ngiyayithanda?" Lokhu kuziphatha akuhambisani nethemba lesipiliyoni, amakhasimende, abatshalizimali, abasebenzi, abanikeli, abasebenzisi (njalonjalo) abazoba nakho.
Futhi, khumbula ukuthi abantu abasemkhakheni wokubeka uphawu nowokumaketha kuphela abachitha isikhathi esiningi behlukanisa okuhle nokubi kwegama. Yebo, ngaphandle kokuthi igama empeleni libi, lokho kusho. Ngemuva kwalokho ungathola uJoe Consumer enephathi yokubhuqa ngezindleko zakho. Kepha uma igama lakho lifanelana necebo lakho lomkhiqizo elicatshangelwe ngokucophelela, ithemba elijwayelekile alisebenzisi i-millisecond ekuhlaziyweni okunengqondo.
Iqiniso ukuthi abantu babhekana namagama ngokungazi, ezingeni lomzwelo. Masithi inkulumo yakho yekheshi ihamba into efana nale:
Sawubona, nginguJan Smith, umxhumanisi wezinjini zokucinga namaGazillions. Ngisiza abantu ukuthi bazulazule kuwebhu lapho befuna uhlobo olufanele lwemininingwane.
Ngiyalithanda lelo gama? Ingabe kunengqondo? Ingabe wonke umuntu uyalithanda lelo gama? Ngabe lelo gama lisitshela lonke udaba lwale nkampani.
Cha, umlaleli ucubungula konke lokhu omtshele khona (futhi mhlawumbe ukuskena ukuze uthole izinkomba zokuthi angakwethemba nonke ngenkathi esebenzisa uhlu lwezinto ezingama-20 okudingeka azenze kamuva ngalolo suku.) Igama lakho lebhizinisi noma lomkhiqizo imininingwane eyodwa nje encane. Lapho ubuchopho buyibamba, buya emsebenzini kuthwetshulwa amafayela angaphakathi ukuthi igama lingahle libe kanjani noma lihluke kwimizwelo ehambisanayo. Ubuchopho bungabhalisa ukushaya okusheshayo okufana nalokhu:
AmaGaziliyoni. Kuningi lokho. Kuzwakala kumnandi. Hhayi ezejwayelekile. Mhlawumbe kuyingozi. Kumele ulalele kabanzi.
Angisho ukuthi igama alibalulekile. Eqinisweni, kuyingxenye ebucayi yohlelo lwakho lokusayina lomkhiqizo. Igama lisetha ithoni noma linikeze imininingwane noma kokubili. Njenge-logo noma enye inombolo yamaphoyinti okuthinta, igama liyindawo yokungena ezithombeni nemizwa abantu abazokwakha okuzungezile, inkampani yakho, imikhiqizo yakho, nezinsizakalo.
Iphuzu lami limayelana nemvelo yokufakelwa yokubuyekezwa kokudala. Noma ngabe uyakwenza ngokwakho, usebenza ne-consultant noma ungumxhumanisi, kufanele ubhale impendulo yakho ngombono womamukeli womyalezo. Manje ngicela, uphume uzenzele igama elihle.
Tags: brandUkufaka uphawuIgama LenkampaniIgamangokuqambaigama lomkhiqizo
Aug 12, 2009 ku-12: 02 AM
Ngabe ngibe nempendulo ehluke kakhulu kulokhu ngaphambi kokuthi ngifunde uBlink (incwadi kaMalcolm Gladwell). Ngokuyisisekelo kwehlisa izahlulelo ezisheshayo esizenzayo nsuku zonke.
Ngaphambi kokuba ngifunde uBlink ngangiyobe ngithi "cela inqwaba yabantu ubone ukuthi yimuphi ocabanga ukuthi ungcono kakhulu" kepha inqubo yethu yokwenza izinqumo incanyana kakhulu. Kunzima kakhulu ukwenza izinqumo zokumaketha uma ucabanga ngalokhu.
Kimina, uBlink wayefana nomuthi wolwazi oseBhayibhelini. Angiqiniseki ukuthi angikhethi ukuhlala ebumnyameni.